युरोपमा निवास अनुमति पाउनका लागि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। केहि जटिल छन्, अरु सरल छन्। यो सबै एक विशेष राज्यको माइग्रेसन नियम, आवेदकको जीवन परिस्थिति र सर्नको उद्देश्यहरूमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, त्यहाँ युरोपमा छिटो र सजिलोको लागि कसरी निवास अनुमति प्राप्त गर्ने कुनै विश्वव्यापी विधि छैन। केही राज्यहरूमा यो प्रक्रिया रूसीहरूको लागि तुलनात्मक रूपमा सरल हुनेछ, अरूमा यो विभिन्न थप सर्तहरूद्वारा जटिल हुनेछ। चार दर्जन युरोपेली देशहरूको माइग्रेसन कानून र त्यहाँ बस्ने हाम्रा देशवासीहरूको अनुभवको विश्लेषण पछि हामीले गहन समीक्षा गरे। यसलाई पढिसकेपछि पाठकहरूले युरोपमा निवास अनुमति र स्थायी बसोबास कहाँ पाउन सजिलो छ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछन्। विशेष राज्यको माइग्रेसन अधिकारीहरू र यस प्रक्रियाको कुल लागत द्वारा निवास अनुमतिपत्र जारी गर्न सम्भावित कारणहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
युरोपेली देशहरूमा निवास अनुमति
विकल्पहरू प्राप्त गर्न युरोपमा निवास अनुमति धेरै। केहि जटिल छन्, अरु सरल छन्। यो सबै एक विशेष राज्यको माइग्रेसन नियम, आवेदकको जीवन परिस्थिति र सर्नको उद्देश्यहरूमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, एक सार्वभौमिक नुस्खा छिटो र प्राप्त गर्न को लागी सजीलो छ युरोपमा निवास अनुमतिहोईन। केही राज्यहरूमा यो प्रक्रिया रूसीहरूको लागि तुलनात्मक रूपमा सरल हुनेछ, जबकि अन्यमा यो विभिन्न थप सर्तहरूद्वारा जटिल हुनेछ। चार दर्जन युरोपेली देशहरूको माइग्रेसन कानून र त्यहाँ बस्ने हाम्रा देशवासीहरूको अनुभवको विश्लेषण पछि हामीले गहन समीक्षा गरे। यसलाई पढिसकेपछि पाठकहरूले पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछन् निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका कहाँ छ и युरोपमा स्थायी निवास... विशेष राज्यको माइग्रेसन अधिकारीहरूद्वारा निवास अनुमति अनुमति जारी गर्न सम्भावित कारणहरू र प्रक्रियाको कुल लागत पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
युरोप मा एक निवास अनुमति को लाभ
युरोपियन युनियनमा रूसीहरूले निवास अनुमति लिन धेरै कारणहरू छन्। यहाँ मुख्य छन्:
उच्च स्तर र आवासको गुणवत्ता।
स्थिर अर्थव्यवस्था, व्यवसायको गठन र विकासलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दै।
कम बैंक ब्याज दरहरूमा क्रेडिट loansण प्राप्त गर्ने सम्भावना।
उच्च विश्वसनीयता रेटिंगको साथ युरोपेली बैंकहरूमा निक्षेपहरू खोल्ने क्षमता।
व्यक्तिगत बचत, निक्षेप, लगानी र निजी सम्पत्तीको ग्यारेन्टी गरिएको अनवाहनीयता।
ईयू राज्यहरु र विश्वका धेरै देशहरुमा नि: शुल्क भिसा मुक्त यात्रा जुन युरोपेली संघ संग प्रासंगिक सम्झौताहरुमा पुगेको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उच्च तलब रोजगार।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, ईयू निवास अनुमति यूरोपियन नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि मात्र पहिलो कदम हो।
सबैभन्दा सजिलो ठाउँ कहाँ छ र कसरी निवास अनुमति प्राप्त गर्ने
निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका कहाँ हो भन्ने सवालमा विवादास्पद हो। यो आप्रवासीको भलाइको स्तर, उमेर, शिक्षा, सामाजिक स्थिति र अन्य अतिरिक्त सूक्ष्मताहरूलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। सामान्यतया, अधिक कडा चयन र, तदनुसार, अधिक नोकरशाही अवरोधहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध मुलुकहरूमा अवस्थित छन् जुन आप्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पर्दैन। यसमा संयुक्त अधिराज्य, स्विडेन, लक्जमबर्ग, हल्याण्ड सामेल छ। उही समयमा, यूरोपियन निवास अनुमति धेरै राज्यहरूमा कार्यरत विशेष कार्यक्रमहरूको अनुसार जारी गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको उद्देश्य योग्य ब्यक्तिहरुलाई घरेलू बजारमा आकर्षित गर्नु हो। साथै, युरोपमा निवास अनुमति पत्र अक्सर धनी लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गरिन्छ जसले राज्यको अर्थव्यवस्थामा निश्चित मात्रामा लगानी गर्न सक्षम हुन्छन्। औसतमा, यसको आकार thousand 350० हजार starts बाट सुरु हुन्छ, र लगानीको रूप फरक छ। युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि मुख्य विकल्पहरू मध्ये, तपाईंले संकेत गर्नु आवश्यक छ:
EU मा अचल सम्पत्ती खरीद एक निश्चित रकम भन्दा कमको मानको लागि। ईयु निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि यो सब भन्दा साधारण तरीका हो। यूरोपियन युनियनमा जान चाहने धेरै धनी रूसीहरूको लागि उपयुक्त।
स्थानीय अर्थव्यवस्था मा लगानी। अनुमति दिन्छ, एक निवास अनुमति प्राप्तको साथसाथै, यो बचत बचत युरोपियन स्टकमा वा स्थिर लाभदायक व्यवसायमा गर्नु फाइदाजनक छ।
तपाईंको आफ्नै कम्पनीको पंजीकरण र निवासीहरूको लागि रोजगारी सिर्जना। यस विकल्पको मुख्य फाइदा भनेको व्यवसायीलाई आर्थिक स्थायित्व, भ्रष्टाचारको अभाव र नोकरशाही अवरोधका अनुकूल परिस्थितिमा आफ्नै व्यवसाय विकास गर्ने अवसर हो।
विवाह र एक युरोपेली देशको नागरिक वा नागरिक।
एक विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी मार्फत युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्नु जुन एक स्थानीय रोजगारदातासँग खुला खुला सम्झौताको समापनको लागि प्रदान गर्दछ। मौसमी कामदारहरू जो एक निश्चित अवधिको लागि काम गर्दछन् यस मापदण्डको लागि योग्य हुँदैनन्।
परिवार पुनर्मिलन। यो अवसर ईयू नागरिकका नजिकका आफन्तहरू - पति / पत्नी र बच्चाहरू, र कहिलेकाँही अभिभावक (पेन्सनकर्ताहरू, गरिबहरू, अशक्तहरू) द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
राज्य मान्यता द्वारा एक शैक्षिक संस्था मा शिक्षा। केही राज्यहरूमा ईयूमा आवास अनुमति पनि स्थानीय भाषाको अध्ययन र सुधार गर्नको लागि पाठ्यक्रमहरू लिन प्रदान गरिएको छ।
एक शैक्षिक वा अनुसन्धान संगठन संग एक अनुबन्ध अन्तर्गत वैज्ञानिक काम।
एक यूरोपीय देशको क्षेत्र मा रहन सम्बन्धित काम। कूटनीतिक विभागहरू र आधिकारिक प्रतिनिधित्वहरू (वैज्ञानिक, व्यवसाय, सांस्कृतिक) का कर्मचारीहरू यस श्रेणी भित्र पर्छन्।
दीर्घकालीन उपचार र पुनर्वास कोर्स।
EU मा विशेष योग्यताको लागि निवास अनुमति। यो व्यक्तिगत आधारमा प्रदान गरिन्छ, सामान्यतया राज्य प्रमुखको व्यक्तिगत फरमानद्वारा वा संसदको डिक्रीबाट।
राष्ट्रिय निवास अनुमति - राष्ट्रिय वा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण गर्न।
निवास अनुमति प्राप्त गरे पछि, एक विदेशीलाई पछि युरोपमा स्थायी निवास अनुमति दिने अधिकार प्राप्त हुन्छ, साथै अन्य थप प्राथमिकताहरू पनि। उदाहरण को लागी, त्यस्ता व्यक्तिले निजी स्वामित्व मा जग्गा प्लट प्राप्त गर्न र अन्य कानूनी रूपमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्दछन् जुन अन्य विदेशीहरूको लागि पहुँच योग्य छैन। अर्को, हामी युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्नका बारहरू विचार गर्नेछौं, जहाँ यो गर्न सजिलो र सस्तो हुन्छ।
अस्ट्रियाको निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि सब भन्दा मनपर्दो विकल्प आरडब्ल्यूआर-कार्टे हो। यो तथाकथित "रातो सेतो रातो कार्ड" योग्य विशेषज्ञहरुलाई जारी गरिएको हो। आरडब्ल्यूआर-कार्टेका लागि आवेदकहरूले स्थापित पेशेवर मापदण्डहरूको अनुपालनका लागि सरकारी एजेन्सीहरूसँग चेक पास गर्नुपर्दछ, जसमा विभिन्न मापदण्डहरू समावेश छन्।
लागत। रातो सेतो सेतो रातो कार्डको साथ निवास अनुमति पत्रको लागि 30० देखि १०० हजार सम्म खर्च हुनेछ।
सर्तहरू। प्राय: व्यापारीहरूले अष्ट्रियामा यस प्राकृतिकरणको विधिको लागि आवेदन दिन्छन्। तिनीहरूले देशको अर्थव्यवस्था को लागी व्यापार गतिविधिहरु को लाभ मा राज्य श्रम विभाग मा एक राय प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
उच्च-नेट-मूल्य भएका व्यक्तिको लागि - स्थितिले तिनीहरूलाई अस्ट्रियामा काम गर्न र व्यापार गर्न अनुमति दिँदैन। प्रत्येक संघीय राज्यको कडा सीमित कोटाका अनुसार जारी गरियो। आवेदकलाई कम्तिमा २००० को औसत मासिक आम्दानीको दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध गराउन आवश्यक छ € आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्यको लागि। अस्ट्रियामा सञ्चालित एउटा बैंकमा कम्तिमा २० हजार हुनुपर्दछ € वयस्कका लागि र १० हजार नाबालिग बच्चाको लागि।
निलो कार्ड भाडामा लिने विशेषज्ञहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि उनीहरूसँग एक अस्ट्रियाई रोजगारदाताबाट आधिकारिक निमन्त्रणा छ, रोजगार सम्झौतामा जुन मासिक आम्दानीको रकम €१०० भन्दा कम छैन।
प्राप्त निवास अनुमति विस्तार गर्ने संभावना स्थानीय नागरिकको जीवनमा विदेशी नागरिकको एकीकरणको डिग्रीमा निर्भर गर्दछ। तपाईंले निरन्तर तपाईंको भाषा सीप सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, बच्चाहरूलाई स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूमा नियुक्त गर्नुहोस्, मेडिकल र सामाजिक बीमा नीतिहरू जारी गर्नुहोस्।
बेल्जियमको राज्यमा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने सब भन्दा साधारण तरिकाहरू:
बेल्जियमको रोजगारदातासँग रोजगार सम्झौता।
बेल्जियममा पहिले नै दर्ता गरिएको व्यावसायिक कम्पनीको खरीद।
यहाँ तपाईंको आफ्नै व्यवसाय खोल्दै, कम्तिमा thousand ० हजार annual को वार्षिक कर कटौतीको अधीनमा। त्यो हो, ताकि कम्पनी काल्पनिक छैन, तर सक्रिय रूपमा काम गरिरहेछ।
पंजीकरण लागत - 30० हजार € बाट सुरू।
सर्तहरू। बेल्जियमको किंगडममा कामका लागि अनुमति पत्र जारी गर्नु कडाईका साथ सीमित छ। अधिक कोटा आईटी-टेक्नोलोजीहरू, स्वास्थ्य सेवा, ईन्जिनियरि education शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने योग्य विशेषज्ञहरूलाई छुट्याइएको छ। बेल्जियमका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि निवास अनुमति प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ।
पश्चिमी यूरोपको भन्दा यहाँ आवासीय अनुमति प्राप्त गर्न केही सजिलो छ। यहाँ प्रदान गर्ने मुख्य कारणहरू:
अवकाश लाभहरूको उपलब्धता।
घर जग्गा खरीद।
कर अधिकारीहरु संग अनिवार्य दर्ता संग एक वाणिज्यिक कम्पनी को एक प्रतिनिधि कार्यालय को पंजीकरण।
बल्गेरियन नागरिकहरूको लागि दर्जन भन्दा बढी स्थानहरूको सिर्जनाको साथ व्यवसाय सुरू गर्दै
एक नागरिक / नागरिक बुल्गारिया वा कुनै पनि ईयू देश संग एक विवाह संघ को समापन।
बल्गेरियाली जातीय जराको उपस्थिति।
सर्तहरू। आवेदक आवश्यकताहरू पूरा गर्न बाध्य छन्, प्रवासको मनसायमा निर्भर गर्दै। बुल्गारियामा आवासको लागि - या त स्वामित्व वा दीर्घकालीन पट्टामा, र बाँच्नको लागि साधनहरू। तपाईंको आयको स्तर कागजात गर्नुहोस् र बीमा मेडिकल पॉलिसीको लागि आवेदन दिनुहोस्। पेश गरिएको आवेदन विचारको सर्तहरू १ महिना भन्दा बढी हुँदैन।
लागत। यदि निवास अनुमति प्रदान गर्नका लागि उद्देश्य रियल इस्टेटको खरीद हो भने, यसको मान value०० हजार thousand भन्दा बढी हुनुपर्दछ। लगानीकर्ताहरूको लागि, कम लगानीको सीमा १२ 300 हजार € हो, र यी अविकसित क्षेत्रहरू हुनुपर्दछ, राजधानी र ठूला केन्द्रहरू होइन। घर जग्गा वा लगानी को अधिग्रहण व्यक्ति द्वारा मात्र होइन, कानुनी निकायहरु द्वारा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसोभए निवास अनुमतिमा अधिकारहरू यस व्यवसायिक संरचनाका मालिकहरूद्वारा अधिग्रहण गरिन्छ, जसले यसको आधिकारिक पूंजीको %०% भन्दा बढी स्वामित्व राख्छन्। अन्य कारणका लागि यसका लागि आवेदन दिने विदेशीहरूका लागि जम्मामा दुई हजार युरोभन्दा बढी हुनु आवश्यक छ।
बेलायतको नागरिकता पाउन गाह्रो छ। यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्न उत्तम तरिका VIP प्रस्ताव प्रयोग गर्नु हो। यो सरलीकृत तरीका एक महत्वपूर्ण लगानीको लागि विनिमयमा आठ हप्ता भित्र स्थिति प्राप्त गर्नु हो। निम्न लगानी विकल्पहरू सम्भव छन्:
सरकारी धितो खरिद।
स्थानीय लगानी कोषमा सेयरको खरीद।
टापुमा दर्ता भएका फर्महरूमा रुचिहरूको अधिग्रहण र बेलायत कर निवासीहरू हुन्।
सर्तहरू। जब लगानी गर्नुहोस्, तपाईं केवल आफ्नै पूँजी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र bण लिएको छैन। लगानी गरिएको पैसाको मूल दस्तावेज हुनुपर्दछ। जब विवाहित जोडीले बेलायतमा निवास अनुमति प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूको कुल लगानी सम्पत्तिहरू ध्यानमा राखिन्छन्।
लागत। एक सरल वीआईपी प्रस्ताव अन्तर्गत बेलायती निवास अनुमति प्राप्त गर्न, तपाईंले देशको आर्थिक विकासमा कम्तिमा £ २ लाख लगानी गर्नुपर्नेछ। पछिको स्थायी बसोबास स्थिति प्रदान गर्ने गति सीधै लगानी गरिएको सम्पत्तिको आकारमा समानुपातिक हुन्छ।
२ देखि million मिलियन पाउन्ड - years बर्ष।
To देखि १० करोड - years बर्ष,
१० करोड भन्दा बढी - २ बर्ष।
यो देश रूसीहरूले युरोपमा निवास अनुमतिका बारे सोच्न उत्तम विकल्प हो: जहाँ यसलाई लिन सजिलो र सस्तो हुन्छ। हंगेरीमा, यो अन्य ईयु राज्यहरूको भन्दा छिटो भन्दा छिटो जारी गर्न सम्भव छ - केवल तीन हप्तामा। यी प्राथमिकताहरू निश्चित पैसामा भएका मानिसहरूलाई दिइन्छ।
लागत। लगानीको आकार आवेदकको प्रति परिवार thousand०० हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ। साथै, thousand० हजारaको एक पटकको शुल्क तिरेको छ।
सर्तहरू। आर्थिक माइग्रेसन कार्यक्रमलेbबर्ष भित्रमा ग्यारेन्टी रिटर्न सहित सरकारी बन्धनमा कोषको प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्था गर्दछ। तीन हप्ता भित्र निवास अनुमति दिइसकेपछि लगानीकर्ताले छ महिना पछि स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन सक्छ। अन्य विकल्पहरूले समावेश गर्दछ:
कम्तिमा १० हजार यूरोको आधिकारिक पूंजीको साथ वाणिज्यिक कम्पनी खोल्दै। उनले एक सक्रिय व्यावसायिक गतिविधि गर्नुपर्दछ र बजेटमा कर तिर्नु पर्छ। एक निवास अनुमति व्यवसाय को मालिक मात्र हैन, तर उसको सम्पूर्ण परिवारलाई प्रदान गरिएको छ।
घर जग्गा खरिद कि केहि आवश्यकताहरु लाई पुरा गर्दछ। न्यूनतम मूल्य सीमा यहाँ सेट गरिएको छैन, तर हंगेरी आउटब्याकमा अपार्टमेन्टको औसत लागत २ thousand हजार exceed भन्दा बढी हुँदैन। थप रूपमा, आवेदकको खाता र उनको अर्को अर्को आफन्तको 25००० भन्दा बढी हुनु पर्छ।
माथिका केसहरूमा स्थायी बसोबास प्राप्त गर्न सम्भव छ तीन बर्ष पछि, र हंगेरीको नागरिकता - थप years बर्ष पछि। यसले कुल आठ बर्ष दिन्छ।
जर्मनी जनसंख्याको धेरै उच्च स्तरको स्तरबाट प्रतिष्ठित छ र, तदनुसार, स्थायी निवासको लागि यहाँ बसाल्न चाहने ठूलो संख्यामा। त्यसकारण जर्मनीमा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्नु गाह्रो छ, विशेष गरी हालसालै भएका घटनाहरूको प्रकाशमा - मध्य पूर्व र अफ्रिकी क्षेत्रबाट आएका आप्रवासीहरूको अनियन्त्रित भीड। जर्मन माइग्रेसन सेवाहरूको माध्यमबाट युरोपमा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सस्तो विकल्प भनेको जर्मन अर्थव्यवस्थामा कम्तिमा आधा मिलियन डलरको लगानी हो। त्यसो भए, तपाईं यसमा काम गर्ने पाँच जर्मन नागरिकहरूको साथ कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ। अर्को सर्त: जर्मनीको संघीय गणतन्त्रको नागरिक वा स्थायी निवास स्थान भएको व्यक्ति सीईओ हुन सक्छ।
अन्य सम्भावित विकल्पहरू:
वित्तीय हलचलता। आवेदकको खातामा रहेको रकमको न्यूनतम रकम स्वतन्त्र रूपमा संघीय गणतन्त्र जर्मनीको प्रत्येक जग्गाद्वारा सेट गरिएको छ।
निलो कार्ड एक स्थानीय रोजगारदाता द्वारा विदेशबाट आमन्त्रित उच्च योग्य पेशेवरहरुलाई मात्र जारी गरियो।
एक विशेष क्षेत्रमा एक व्यवसाय मा लगानी। आवेदक आर्थिक रूपमा राम्रो हुनुपर्छ, उद्यमी अनुभव छ, र एक विस्तृत व्यापार योजना प्रदान गर्नु पर्छ। २०१२ देखि यस अवस्थाको लागि न्यूनतम लगानी सीमा रद्द गरिएको छ।
तपाईं निम्न कारणहरूको लागि यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
एक स्थानीय शिक्षा संस्थान मा अध्ययन।
राजनीतिक आश्रय प्रदान गर्दै।
अन्य ईयु देशहरूको पृष्ठभूमिमा, ग्रीक अधिकारीहरूको माइग्रेसन प्रस्ताव धेरै आकर्षक देखिन्छ। यो एक महिना भित्र यूरोपियन युनियन मा एक निवास अनुमति प्राप्त गर्न सम्भव छ। यसको लागि घर जग्गा वा ग्रीसको अर्थतन्त्रमा निश्चित रकम लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ। यो हुन सक्छ:
नयाँ व्यापार उद्यमको सिर्जना वा अवस्थित एकको खरीद। खर्चको मात्रा thousand०० हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
प्रति आवेदक २ 250० हजार को लागी घर जग्गाको अधिग्रहण, वा एक परिवार को लागी .०० हजार।
सर्तहरू। लगानीकर्तालाई लाभको अधिकतम संख्याको साथ प्रदान गरिएको छ। ग्रीसमा वार्षिक १ 183 दिनको लागि अनिवार्य निवास आवश्यकता रद्द गरियो। लगभग १००% सम्भाव्यताको साथ यस्तो विकल्पले निवास अनुमतिको प्रावधानको ग्यारेन्टी गर्दछ।
अन्य विकल्पहरू। आर्थिक रूपमा धनी प्रवासीहरूले कुनै पनि ग्रीक बैंकमा उनीहरूको खातामा कम्तिमा २ 24 हजार युरो जम्मा गर्न सक्दछन्। यदि चाल सम्पूर्ण परिवारको साथ योजनाबद्ध छ भने, त्यसोभए जीवनसाथीको लागि २०% र नाबालिग बच्चाको लागि १ 20% लगानी गर्न उत्साहित हुनेछ। तपाईंसँग पनि २ हजार over मासिक औसत मासिक आयको लागि कागजातहरू हुनुपर्दछ।
माइग्रेसन नीतिको सर्तमा यस स्कान्डिनेभियाई राज्यलाई सबैभन्दा बढी रूढीवादी र बन्द ईयू राज्य मानिन्छ। यहाँ एक निवास अनुमति को प्रावधान कडा कोटा संग सम्बन्धित छ। डेनमार्कको निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका भनेको व्यवसाय लगानी हो: यहाँ आफ्नै व्यवसाय खोल्नुहोस्, अवस्थित व्यावसायिक कम्पनी वा यसको सेयरको केही अंश किन्नुहोस्।
लागत। न्यूनतम लगानी thousand० हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। खोलिएको कम्पनीको राज्यमा डेनिस नागरिकहरू हुनुपर्दछ, र साथै कर, श्रम र देशको अन्य कानूनहरूको सबै आवश्यकताहरूको पालना गर्दछ। व्यवसाय लगानीको सन्दर्भमा निवास अनुमति १२ महिनाको लागि दिइन्छ, र यो 12 बर्षको लागि वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
आयरिश कानूनका अनुसार निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि संयुक्त लगानीको लागि अनुमति छ: अर्थव्यवस्थामा लगानी र घर जग्गाको अधिग्रहण।
लागत। न्यूनतम लागत कम्तिमा एक मिलियन डलर हो। यिनीहरूमध्ये real०% भन्दा बढि रियल ईस्टेटमा खर्च गर्न अनुमति छैन, र बाँकी टापुको अर्थव्यवस्थामा लगानीको रूपमा जानु पर्छ। यो सार्वजनिक वा निजी वाणिज्यिक धितोहरूको खरीद, एक व्यापार मा एक हिस्सेदारी को खरीद, वा एक सम्पूर्ण अपरेटिंग कम्पनी हुन सक्छ।
सर्तहरू। Orrowण लिने कोषको प्रयोग बिना लगानी गर्नुपर्दछ। लगानीकर्ताले कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ आफ्नै लगानीको पुष्टि गर्न, बैंक कोषसँग होइन। उसको परिवारका सदस्यहरूका लागि निवास अनुमति अन्य भुक्तान र लगानी बिना नै प्रदान गरिन्छ।
स्पेनमा एक निश्चित रकमको लागि घर जग्गा खरीदको लागि, यो "सुनौलो निवास अनुमति" प्राप्त गर्न सम्भव छ। तपाईं आवासीय, व्यावसायिक घर जग्गा, वा जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ।
लागत। "सुनहरी निवास अनुमति" प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम लगानी thousand०० हजार € हो।
सर्तहरू। प्रक्रियाको अवधि एक महिना भन्दा बढी हुँदैन। यो स्थिति प्राप्त गरेपछि, यो एक विदेशी को लागि स्पेन मा वाषिर्क १ दिन भन्दा बढी रहन को लागी पर्याप्त छ। प्राप्त स्थितिले कुनै पनि काम गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर दिदैन। यसको लागि छुट्टै अनुमतिको आवश्यक पर्नेछ। Years बर्ष पछि, तपाईं स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईं राज्यमा १० बर्षसम्म बस्नुभएको छ भने तपाईं स्पेनिश नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
B २० लाखको सरकारी बॉन्ड किन्नुहोस्।
स्पेनी कम्पनीहरूको सेयरमा million १ लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने वा अधिकृत पूंजीमा सेयर प्राप्त गर्ने।
राज्य को एक बैंक मा जम्मा १० लाख for को लागि खोल्दै।
स्पेनी नागरिकहरूको रोजगारी सिर्जनाको साथ राज्यमा व्यापार स्थापना गर्दै। माइग्रेसन कानूनले मौद्रिक सर्तमा लगानी परियोजनाको आकार तोक्दैन, तर कम्पनीले सक्रिय ढ act्गले कार्य गर्नुपर्दछ, बजेटमा कर राजस्व प्रदान गर्दै। श्रम कोड र स्थानीय कानूनको अन्य आवश्यकताहरूको पालना गर्न अनिवार्य छ।
इटालियन माइग्रेसन कानूनका अनुसार यहाँ बस्ने अनुमति पत्रको प्रावधान पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो, यसमा धेरै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्नु हो। त्यसकारण, पेश गरिएको आवेदनमा आवेदकलाई १००% सकारात्मक निर्णयको ग्यारेन्टी छैन। इटालियन बसोबास अनुमति प्राप्तिको अनुभवको आधारमा हामी भन्न सक्दछौं कि सबैभन्दा वास्तविक तरीका भनेको स्थानीय संस्थामा काम खोज्नु हो। एक विदेशी संग एक रोजगार सम्झौता को लागि प्रदान गर्दछ: चिकित्सा स्याहारको प्रबन्ध, आवासको प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा। तपाईं दुवै करार सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ इटाली प्रवेश गर्नु अघि र त्यस स्थानमा पुग्नु अघि।
अन्य विकल्पहरू। तपाईंको आफ्नै व्यावसायिक उद्यम खोल्दै। व्यापारमा प्रारम्भिक लगानी १० हजार यूरो भन्दा बढी हुनुपर्दछ। तपाईंले व्यवसाय खोल्न र यस प्रकारको गतिविधिलाई इजाजत दिन स्थानीय अधिकारीहरूबाट अनुमति पनि लिन आवश्यक पर्दछ। कहिलेकाँही यी दुई चरणहरू सबैभन्दा कष्टकर हुन्छन्।
साइप्रसको आफ्नै लगानी कार्यक्रम पनि छ, जसले तपाईंलाई यहाँ घर जग्गाको अधिग्रहणको सट्टामा निवास अनुमति जारी गर्न अनुमति दिन्छ।
लागत। एक निवास अनुमति प्राप्त गर्न प्राथमिकताहरू 300 € वा अधिकको राशिको साथ आवासको साथ खरीदको सम्झौताको समापनमा प्रदान गरिन्छ। थप सर्त आवेदकको एक परिवार सदस्य प्रति १ 15 हजार plus अधिक वार्षिक income हजार of को वार्षिक आम्दानीको दस्तावेजी प्रमाण हो।
सर्तहरू। यदि स्थापित आवश्यकताहरू पूरा भए, पेश गरिएको आवेदनमा एक सकारात्मक निर्णय तीन महिना भित्र गरिन्छ। Thousand०० हजार सम्मको मूल्यसहित घर जग्गाको अधिग्रहणले निवास अनुमति पनि प्राप्त गर्दछ, तर कम ग्यारेन्टी र लामो विचारधाराको साथ। साथै, स्थिति एक वर्षको लागि मात्र जारी गर्न सकिन्छ, पछि नवीकरणको आवश्यकताको साथ।
यस बाल्टिक गणतन्त्रमा २ 250०,००० डलरको रियल ईस्टेट खरीद गर्दा यसलाई "सुनौलो निवास अनुमति" प्राप्त गर्न अनुमति दिइन्छ। थप सर्तहरू:
केवल एक घर जग्गा वस्तु यस मूल्यको लागि खरीद गरिएको छ।
खाली, अविकसित जग्गा प्लट किन्न यो प्रतिबन्धित छ।
खरीद गरिएको सम्पत्तिको क्याडस्ट्रल मूल्य thousand० हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
लागत। स्वामित्वमा अचल वस्तु खरीद गर्दा लाटभियामा निवास अनुमति पत्रको लागि आवेदकले यसको मूल्यको%% शुल्क तिर्नु पर्छ। त्यो हो, न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य २ 5० हजारको साथ, यो १२..250 हजार € हुनेछ।
अन्य सम्भावनाहरू। कम्तिमा business 35 हजार € को एक स्थानीय व्यापार मा लगानी। यस अवस्थामा निम्न अतिरिक्त सर्तहरू पनि भेट्न सकिन्छ:
कम्पनीका कर्मचारीहरु people० भन्दा बढी मानिसहरु।
कम्पनीको वार्षिक कारोबार कम्तिमा १० करोड डलर हो।
बजेटमा वार्षिक कर राजस्व - thousand० हजार € बाट।
१ in०,००० युरो भन्दा बढी व्यवसायमा लगानी गर्दा आवेदकले थप सर्तहरू बिना लातवियाई बस्ने अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछ।
यहाँ लिथुआनियाली नागरिकहरूको लागि तीन रोजगारीको साथ व्यवसायिक संगठन खोल्दा निवास अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिन अनुमति छ। एकै समयमा, यो स्थिति दर्ता गर्न को लागी करीव months महिना लाग्नेछ।
लागत। ब्यापारमा प्रारम्भिक लगानीको आकार २ thousand हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। एक विदेशीलाई लिथुआनियामा आफ्नो व्यवसाय खोलेको छ महिना पछि बसोबास अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिन अधिकार छ। कम्पनीको पूंजीमा उसको हिस्सा १/1 भन्दा बढी हुनुपर्दछ, जबकि ऊ आफैंमा बोर्ड वा निर्देशकको सदस्य हो।
अन्य विकल्पहरू। तपाईं लिथुआनियामा रेडीमेड व्यवसाय पनि किन्न सक्नुहुनेछ, वा अर्को देशमा दर्ता गरिएको कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नुहुन्छ। यी अवस्थाहरूमा, आवश्यकताहरू उस्तै नै रहन्छन् - लिथुआनियाली नागरिकहरूको लागि स्टाफमा positions पदको सिर्जना।
लक्जमबर्गमा धनाढ्य विदेशीहरूको लागि यो काम र व्यापार गर्ने अधिकार बिना निवास अनुमतिको प्रावधानको लागि प्रदान गरिएको छ। आवेदकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कागजात गर्नुपर्नेछ र यस डचीमा घर किन्नुपर्नेछ।
लागत। लक्जमबर्ग निवास अनुमतिका लागि आवेदकको आफ्नो खातामा २ his हजार भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
अन्य विकल्पहरू। यो एक स्थानीय संगठन संग एक रोजगार सम्झौता पछि, एक विदेशी को काम को अधिकार संग निवास अनुमति प्राप्त गर्न को लागी अनुमति छ। आप्रवासी एक कर्मचारी को रूप मा कार्य गर्नु पर्छ।
माल्टामा, निवास अनुमति खरीदका लागि मात्रै प्रदान गरिन्छ, तर घर भाडामा लिँदा पनि।
लागत। देशका बिभिन्न शहरहरू र क्षेत्रहरूका लागि, घर जग्गाको खरीदमा लगानीको लागि विभिन्न सीमा छन्। तिनीहरू २२० देखि २220 हजार युरो सम्मका छन्। घर जग्गा भाडामा लिँदा वार्षिक भाडा तिर्ने रकम 275। Cities हजार .9,6 सबैभन्दा ठूलो शहरहरूमा र ग्रामीण क्षेत्रमा in. 8,7. हजार भन्दा बढी हुनुपर्दछ माल्टिस कानुनका अनुसार आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका भाडावालाले पनि हरेक वर्ष सम्पूर्ण परिवारलाई १ 15 हजार युरो कर तिर्नु पर्नेछ।
सर्तहरू। एक निवास अनुमति को पंजीकरण खरीद वा पट्टा लेनदेन अघि अनुमति छ। यस केसमा, आवेदन ration महिना भित्र सार्ने अधिकारकर्ताहरूले विचार गरे। यदि अनुमोदित भयो भने, विदेशीले अर्को वर्ष भित्र, यहाँ निजी सम्पत्ति वा भाँडाको लागि घर जग्गा खरिद गर्नै पर्छ। अन्यथा, यसको स्थिति रद्द हुनेछ।
अन्य विकल्पहरू। एउटा माल्टिज निवास अनुमति देशका स्थायी बासिन्दा द्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले कल्याणको निश्चित स्तर पाएका छन्। वार्षिक आयको लागि न्यूनतम थ्रेसोल्ड २ thousand हजार lower भन्दा कम हुनु हुँदैन। साथै, वैकल्पिक रूपमा, आवेदकको आधा मिलियन यूरो भन्दा बढीको व्यक्तिगत बचत रकम हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो परिवारको साथ माल्टामा सर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, यो अर्को सदस्य १ for० हजारको प्रत्येक सदस्यको लागि हो। भर्खरै, एउटा प्रवास कार्यक्रम "लगानीको लागि निवास अनुमति" टापुमा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्न मानक EU अवसरहरू छन् - रोजगार, स्थानीय शैक्षिक संस्थामा अध्ययन, परिवार पुनर्मिलन, आदि। विशेष प्रस्तावहरू मध्ये एक यस राज्यमा आफ्नो व्यवसाय खोल्न चाहने विदेशी व्यापारीहरूको लागि निवास अनुमति हो। यहाँ व्यवसाय गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय रूप LLC हो। औसतमा समाज खोल्नको लागि चार महिना सम्म लाग्छ।
लागत। यसको उद्घाटनमा वाणिज्य कम्पनीको क्यापिटलाइजेशन १ thousand हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
पोल्याण्डको अध्यागमन कानूनले विदेशी उद्यमीलाई निवास अनुमति अनुमति दिन अनुमति दिन्छ यदि ऊ कम्पनीको मालिक वा व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दछ भने।
लागत। पोल्याण्डमा दर्ता गरिएको कम्पनीको पूंजीकरण स्तर १ 1300०० exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ, र औसत वार्षिक कारोबार १ thousand हजार € हो।
सर्तहरू। एक विदेशी कम्पनी को कर्मचारी कम्तिमा दुई पोलिश नागरिक हुनु पर्छ। Years बर्ष पछि, एक विदेशी व्यापारीलाई स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिन अधिकार छ।
अन्य विकल्पहरू। अर्को तरिका एक वाणिज्यिक कम्पनी खोल्ने हो, जहाँ एक पोलिश नागरिक, वा ईयू देश को कुनै, बोर्डको निर्देशक वा अध्यक्ष नियुक्त हुनेछ। दर्ताका सर्तहरू उस्तै नै रहन्छन्।
त्यहाँ एकदम छोटो समयमा युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि माइग्रेसन प्रोग्राम छ। त्यसोभए, रियल इस्टेट खरीद गर्दा, एक विदेशीले दुई महिना भित्र एक निवास अनुमति प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। यसबाहेक, यो आवेदक आफैंमा मात्र लागू हुन्छ, तर कुनै अतिरिक्त लागत बिना तुरून्त उसको सम्पूर्ण परिवारमा।
लागत। तपाईं एकै पटकमा एक वा धेरै वस्तुहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सर्त यो हो कि कुल खरीद मूल्य २ thousand० हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ। स्थिति दर्ताका लागि अतिरिक्त लागतहरू १० हजार यूरो हुन्।
सर्तहरू। प्रवास सेवामा निवेदन बुझाउनु अघि खरीद गर्नु आवश्यक छ। देश मा प्रवेश को मिति देखि days ० दिन को म्याद समाप्त हुनु अघि स्थिति दिनका लागि निवेदन बुझाउनु पर्छ।
पोर्तुगाली निवास अनुमति को प्राथमिकता प्रावधान पनि देशको अर्थव्यवस्था मा कम्तिमा एक लाख यूरो को लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु को लागी प्रदान गरीन्छ। लगानीको फारम कुनै पनि हुन सक्छ - सेयर वा अन्य सेकुरिटीको खरीद, एउटा पोर्तुगाली वाणिज्य फर्मको हिस्सेदारी।
पोर्तुगालमा व्यापार खोल्दै पोर्तुगाली नागरिकहरूका लागि १० भन्दा बढी ओहदा प्रदान गर्दै। यहाँ व्यवसाय गर्न को लागी प्रमुख रूप एक बन्द संयुक्त-स्टक कम्पनी हो।
रोमानियाई निवास अनुमति प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो प्रक्रिया हो। यहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरू एक विशेष सरकारी सेवा एआरआईएस द्वारा संचालित छन्। यसका कर्मचारीहरू होशियारीपूर्वक विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको हरेक लगानी परियोजना।
लागत। व्यापार खोल्न वा पैसा लगानी गर्न रोमानियाई कम्पनीहरूले कम्तिमा १०,००,००० डलर खर्च गर्नुपर्नेछ।
सर्तहरू। विस्तृत व्यापार परियोजना एआरआईएस अधिकारीहरूलाई बुझाइन्छ, जसले रोमानियाली नागरिकहरूको लागि १ places स्थानहरू प्रदान गर्दछ। विदेशी व्यवसायीहरूको लागि एक निवास अनुमति एक बर्षको लागि जारी गरिन्छ, जस पछि यसलाई ann बर्षको लागि वार्षिक नवीकरण गर्न आवश्यक पर्दछ। यस अवधिको अन्तमा, यसलाई स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन अनुमति छ।
स्लोभाकियामा निवास अनुमति प्राप्त गर्न कुनै कारणले गरिएको छैन, तर आप्रवासीले निश्चित लक्ष्यहरूको प्राप्तिको लागि:
तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरू गर्दै।
वैज्ञानिक र शैक्षिक गतिविधिहरू।
स्लोभाकिय निवास अनुमति प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ, यदि तपाईसँग युरोपेली संघको निलो कार्ड छ भने, परिवार पुनर्मिलनको आधारमा, जातीय स्लोभाक। रसियनहरूका लागि सजिलो विकल्प स्लोभाकियामा आफ्नै व्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्नु हो। उद्यमी गतिविधि को प्राथमिकता फार्म LLC हो। दर्ता सामान्यतया -4--5 महिना भन्दा बढी लिदैन।
लागत। स्लोभाकको निवास अनुमतिका लागि आवेदकको कम्तिमा २ thousand हजार must बैंक खातामा हुनु पर्छ। खोलिएको कम्पनीको अधिकृत पूंजी 23 हजार € भन्दा बढी छ।
सर्तहरू। आवेदकले आफ्नो वित्तीय व्यावहारिकता कागजात गर्नुपर्दछ, प्रवास सेवामा ब्यापार योजना बुझाउनुपर्दछ, खरीद वा देशमा बस्ने भाँडा बस्ने ठाउँ, र एक चिकित्सा बीमा नीति जारी गर्नु पर्छ। एक निवास अनुमति छ महिना देखि दुई वर्ष को लागी प्रदान गर्न सकिन्छ, पछि यो नविकरण हुनु पर्छ।
स्लोभेनियामा निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो र सब भन्दा चाँडो तरीका भनेको तपाईको कम्पनी यहाँ दर्ता गर्नु वा अवस्थित स्थानीय कम्पनीमा लगानी गर्नु हो। दुई व्यक्तिले एक पटकमा यो स्थितिको लागि आवेदन दिन सक्दछन्: कम्पनीको मालिक, कम्तिमा अधिकृत पूंजीको कम्तिमा %१% छ, र यसको निर्देशक। अनुदान स्थिति को लागी एक आवेदन को लागी विचार को लागी समयावधि लगभग लाग्छ। 51 महिना।
लागत। व्यापार लगानी € 50,0 हजार को राशि हुन पर्छ।
सर्तहरू। स्लोभेनियामा कम्पनी खोल्न वा प्राप्त गर्ने एक व्यक्तिले यहाँ बस्ने ठाउँ किन्न वा भाँडामा लिनै पर्छ। निवास अधिकारीसँग कम्पनीको आधिकारिक दर्ता पछि मात्र कर सम्भव छ। यस प्रक्रियामा to देखि months महिना लाग्न सक्दछ। प्लस स्थिति - यसले एक विदेशीलाई EU मा काम गर्ने अधिकार दिन्छ।
दुई प्रकारको निवास अनुमति यहाँ प्रदान गरिएको छ:
कोटी "A" - निरन्तर, years बर्षको लागि जारी गरियो। फिनल्याण्ड मा व्यापार सुरू र गर्न को लागी सुविधाजनक।
कोटी "B" - अस्थायी, प्रशिक्षण अवधि वा एक निश्चित-अवधि अनुबंधमा कामको लागि।
फिनिश अध्यागमन कानून विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई वफादार छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि निवास अनुमति प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने संख्या परम्परागत रूपमा कम छ, र स्थिति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अवधिमा months महिना भन्दा बढी हुँदैन।
लागत। फिनल्याण्डमा एक विदेशीले खोलेको कम्पनीको अधिकृत पूंजी € २. thousand हजार भन्दा बढी हुनुपर्दछ, र आवेदकको व्यक्तिगत आय € १. thousand हजार भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। कमर्शियल उद्यमको कम्तिमा आधा बोर्ड सदस्यहरू यूरोपियन युनियनका नागरिक हुनुपर्दछ। एक विदेशी उद्यमी पनि एक विस्तृत व्यापार परियोजना प्रदान गर्नु पर्छ। अन्यथा, फिनिश कानून विदेशी ब्यापार लगानीकर्ताहरूलाई पर्याप्त वफादार छ:
कम्पनीको कारोबार को आकार को लागी कुनै आवश्यकता छैन।
फिनिश नागरिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाको रूपमा कुनै शर्त छैन।
लगानी रकमको लागि कुनै सानो सीमा छैन।
कम्पनीले काम गर्नका लागि पर्याप्त छ, करहरू बजेटमा जान्छन्, र ज्याला कर्मचारीहरूलाई दिइन्छ।
फ्रान्स मा आर्थिक धनी व्यक्तिहरु को लागी एक अधिमान्य निवास अनुमति कार्यक्रम छ। यो सत्य हो कि यसले निजी व्यवसाय वा रोजगारीको लागि अनुमति प्रदान गर्दैन। दर्ता प्रक्रिया छ महिनासम्म लिन सक्दछ।
लागत। कुनै पनि फ्रान्सेली बैंकमा, आवेदकको कम्तिमा thousand० हजार must हुनुपर्दछ। प्लस आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्य को लागी एक समान राशि एक निवास अनुमति को लागी आवेदन।
सर्तहरू। वित्तीय व्यवहार्यताको पुष्टि गर्नको लागि, आप्रवासन संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आयको स्तरमा कागजातहरू प्रदान गर्नु आवश्यक छ, फ्रान्समा बस्ने ठाउँको खरीद वा भाँडाको लागि एक इनभ्वाइस र सम्झौता।
लगानी। एक प्राथमिक अधिवास अनुमति प्राप्त गर्न, तपाईं फ्रान्सेली अर्थव्यवस्था मा कम्तिमा € 10 मिलियन लगानी गर्न आवश्यक छ। लगानीकर्ताले कम्तिमा organization०% शेयर वा वाणिज्य संगठनको सेयर प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि एक नयाँ कम्पनी सिर्जना गरिएको छ भने, यसको कर्मचारीहरू 30० भन्दा बढी कर्मचारीहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
वाणिज्य स्थिति। कम्पनी प्रबन्धक र उसको परिवार द्वारा प्रदान गरीएको।
दोस्रो कामदारहरू। फ्रान्समा दर्ता भएका विदेशी फर्महरू, शाखा र प्रतिनिधि कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई जारी गरियो।
यहाँ, राम्रो काम गर्नु परदेशी नागरिकले सजिलै बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सक्दछ जब उसले क्रोएशियामा एक वाणिज्यिक कम्पनी दर्ता गर्दछ।
लागत। अधिकृत पूंजीको न्यूनतम रकम २.2,7 हजार € भन्दा कम हुँदैन।
सर्तहरू। निवास अनुमति आवेदकको कम्तिमा roati१% क्रोएशियामा दर्ता गरिएको कम्पनीमा सेयर छ। यदि यो सर्त पूरा भयो भने, विदेशीले इजाजतपत्र प्राप्त गर्दछ जसले उसलाई उत्पादन र व्यापार गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। उही समयमा, यो निषेध गरिएको छैन यदि कम्पनीको १०० प्रतिशत विदेशी पूंजीको हिस्सा छ।
अन्य विकल्पहरू। क्रोएशियामा दर्ता गरिएको कम्पनीमा प्रबन्धकीय स्थानमा परेका विदेशीहरूको लागि निवास अनुमतिका लागि आवेदन दिन अनुमति छ। तलबको आकार राष्ट्रिय औसतको स्तरमा हुनुपर्दछ, जसको बारेमा १.१ हजार € छ। एक विदेशी द्वारा खोलिएको संगठनको क्यापिटलाइजेशन १ thousand हजार exceed भन्दा बढी हुनुपर्दछ, र यसको कर्मचारीहरू तीन क्रोएसियाली नागरिकहरू समावेश गर्दछ।
चेक गणतन्त्रमा ब्यापारको लागि अन्य आवेदकहरूको लागि बसोबास अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिन सजिलो छ। यहाँ उद्यमी गतिविधि को सबै भन्दा सामान्य रूप LLC हो, किनकि व्यक्तिगत उद्यमीले ठूलो कर योगदान तिर्छन्। दर्ता एक महिना लिन सक्दछ, थप महिनाको अर्को जोडी तपाईं एक निवास अनुमति को लागी पर्खनु पर्छ। एक आप्रवासीको सम्पूर्ण परिवारले यो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दछ।
लागत। कुल खर्च:
1 हजारaबाट एक निवास अनुमति को पंजीकरण।
LLC को पंजीकरण - thousand हजार, 3..7,5 हजारaको पूंजीकरण संग।
JSC को पंजीकरण - thousand हजार, १ 5० हजारaको पूंजीकरणको साथ।
आवेदकको खातामा €3.०० भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। तपाईंले चेक निवास अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिनु अघि कम्पनी दर्ता गर्नु पर्छ। आवेदक एक सम्बन्धित लाइसेन्स संग एक कम्पनी को एक संस्थापक वा निर्देशक हुन सक्छ।
यो स्कान्डिनेभियाई राज्य युरोपमा आप्रवासीहरूका लागि बन्द बन्द राज्यहरू मध्ये एक हो। यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि एक व्यापारीले यहाँ JSC दर्ता गर्नुपर्नेछ।
लागत। स्वीडेनमा एक कम्पनी दर्ता गर्न को लागी १० हजार लाग्नेछ, एक निवास अनुमति प्राप्त गर्न - अर्को २,२10० €। परिवारका सदस्यहरूका लागि तपाईले थप १२€० € तिर्नु पर्ने हुन्छ। आवेदकको खातामा २१,००० भन्दा बढी हुनुपर्दछ, र पति / पत्नीका लागि अर्को १०..2 हजार र बच्चाका लागि .250..1250 हजार।
सर्तहरू। यूरोपियन युनियनका एक नागरिकलाई मात्र कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा सूचीबद्ध हुने अधिकार छ।
एस्टोनियामा निवास अनुमति प्राप्त गर्ने निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यको अर्थव्यवस्थामा लगानी गर्ने अवसर दिइन्छ।
लागत। न्यूनतम लगानी रकम, 66०० from बाट हो, निम्न प्रकारका सम्पत्तिको रूपमा:
व्यापार लगानीकर्ताको व्यक्तिगत कोष।
नयाँ खोलिएको कम्पनीको मुख्य सम्पत्तीको लागत
सर्तहरू। दर्ता गरिएको कम्पनीले आय आर्जन गर्दैन र तुरून्त काल्पनिकको रूपमा नियन्त्रणको अधीनमा छ। तसर्थ, खुला कम्पनीले आय उत्पन्न गर्नुपर्दछ, अन्यथा यसको मालिकले एक निवास अनुमति को स्थिति गुमाउन सक्छ। कर्मचारी एस्टोनियाई नागरिक हुनु पर्छ। कम्पनी दर्ता गर्नका लागि, एक विदेशी व्यापारीले विस्तृत व्यवसाय योजना, प्रारम्भिक पूंजीको उत्पत्तिमा कागजातहरू र एस्टोनियामा बस्ने ठाउँको खरीद वा पट्टेको लागि सम्झौता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
यूरोपीय राज्यमा रेसिडेन्स परमिट ईयूको बाहिर
अल्बानियामा, यहाँ आफ्नै घर भएका व्यक्तिको लागि "D" भिसामा निवास अनुमति प्राप्त गर्न अनुमति छ। यो एड्रियटिक देश समुद्री किनारका बिदाका प्रेमीहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ, यो विकल्पको ठूलो माग छ।
लागत। देशको राजधानी को केन्द्र मा, आवासीय घर जग्गा को प्रति वर्ग मीटर को मूल्य 800०० € बाट छ, र तिराना को उपनगरहरु - 350 1200०। रिसोर्ट केन्द्रहरुमा, आवास लागत प्रति वर्ग मीटर १२०० to सम्म बढ्न सक्छ।
सर्तहरू। एप्लिकेसनको साथ, तपाईंले बस्ने ठाउँको स्वामित्वको प्रमाणपत्र र बाँच्नको लागि पैसाको राशि प्रदान गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भमा, स्थिति एक वर्षको लागि प्रदान गरिएको छ, नविकरण पछि - दुई वर्ष थप दुई पटक। त्यसो भए तपाई स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
अन्य विकल्पहरू। अल्बेनियाली निवास अनुमति प्राप्त गर्नका लागि सरलीकृत योजना ब्यापार लगानीकर्ताहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यहाँ नयाँ कम्पनीको पञ्जीकरणमा १--1 दिन भन्दा बढि समय लाग्छ, र यसको लागत २ 5०--250०० is को हुन्छ। क्यापिटलाइजेसनको मात्रा कानूनी रूपमा परिभाषित छैन। देशको अर्थतन्त्रमा १०,००,००० भन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तुरुन्त अल्बेनियाली नागरिकता दिइन्छ।
यो सानो पाइरेन रियासतमा, त्यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्न को लागी धेरै विकल्पहरू छन्:
Andorran व्यापार मा लगानी।
सरकारी बन्डको खरीद।
माथिका अवस्थाहरूमा, न्यूनतम लगानी रकम 350 90० हजार starts बाट सुरु हुन्छ। साथै, आवेदकको यहाँ व्यक्तिगत वा भाँडामा बसोबास गर्नुपर्दछ, र कम्तिमा XNUMX ० दिनसम्म प्राचार्यत्वमा बस्नु पर्छ।
लागत। स्थानीय वित्तीय कोष आईएनएएफमा डिपोजिटरी खातामा, तपाईले आवेदक आफैले thousand० हजार transfer ट्रान्सफर गर्नु पर्छ, थप उसको परिवारका प्रत्येक सदस्यका लागि १० हजार। औसत वार्षिक आयको लागि आवश्यकता छ: आवेदकका लागि thousand 50 हजार र आश्रितका लागि १२ हजार।
सर्तहरू। Andorra EU का हिस्सा नभएकोले निवास अनुमतिले स्वचालित रूपमा युरोपियन युनियनमा बस्ने अधिकार दिदैन। यो गर्नका लागि तपाईंले Schengen भिसाका लागि छुट्टै आवेदन दिन पर्छ।
बोस्निया र हेर्जेगोविना
बोस्निया र हर्जेगोभिनामा निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका भनेको आफ्नै वाणिज्य उद्यम दर्ता गर्नु हो। व्यापार लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ प्रस्तुत अनुरोधहरू न्यूनतम छन्।
लागत। आवेदकसँग जम्मा खातामा १. 1,5 हजार than भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। रेजिष्ट्रेसन घटनाहरू सामान्यतया २ देखि weeks हप्ता सम्ममा लिन सक्दछ, साथै उही रकमले निवास अनुमति जारी गरेमा लिन्छ। यो तीन बर्षको लागि प्रदान गरिएको छ, यदि तपाईं आफ्नै घर वा छ महिना वा अधिक अवधि को लागी पट्टा छ।
अन्य विकल्पहरू। कुनै पनि मूल्य मा घर जग्गा किन्न। तपाईंले खरीद मूल्यको २% र विशेषज्ञहरूको कामको लागि एक हजार युरोसम्मको कर शुल्क तिर्नु पर्छ।
आइसल्याण्डमा निवास अनुमति प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ, टापुमा घर जग्गा किन्ने र आफ्नो कम्पनी खोल्दा पनि। यस देशसँग प्रवासको क्षेत्रमा कडा प्रतिबन्धहरू छन्, र त्यहाँ केवल अपवादहरू छन् जसले आइसल्याण्डिक बृहत्तर आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँछन्। अन्य अवस्थाहरूमा, धेरै जसो व्यापार लगानीकर्ताले भरोसा गर्न सक्दछन् बहु बहुविध भिसाको प्रावधान हो।
अल्पाइन माइक्रो-स्टेटमा, निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो विकल्प भनेको स्थानीय कम्पनीमा आधिकारिक रोजगार हो। तर त्यहाँ एउटा अवरोध छ: केवल पहिले नै स्थानीय निवास अनुमति वा कुनै पनि ईयू राज्यमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रियासतमा काम गर्न स्वीकार गरिन्छ। साथै, आवेदकको अद्वितीय विशेषता हुनु आवश्यक छ जुन लिचेन्स्टाइनमा माग छ।
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा यहाँ निवास अनुमति प्राप्त गर्न सम्भव छ।
सर्तहरू। म्यासेडोनियाको इलाकामा आवेदक व्यवसायिक घर जग्गाको मालिक हुनुपर्छ - बिक्री केन्द्र, कार्यालय, उत्पादन कार्यशाला। म्यासेडोनियन माइग्रेसन नियमहरूले दोहरो नागरिकता स्वीकार गर्दैन। तसर्थ, रूसीहरू जसले यस पूर्व युगोस्लाभ गणतन्त्रमा बसोबास गर्ने निर्णय गर्दछन् उनीहरूको विद्यमान रूसी राहदानी त्याग्नु पर्नेछ।
मोनाकोको प्रिन्सिपेलिटी समुद्रतट मनोरन्जन र जुवाको लागि संसारको केन्द्रहरू मध्ये एक हो। तदनुसार, बाँच्न लागत यहाँ धेरै छ, छिमेकी फ्रान्स र इटालीको तुलनामा। तसर्थ, धेरै धनी व्यक्तिहरू यहाँ बसोबास गर्न सक्षम हुनेछन्। उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रताको पुष्टिको रूपमा, आप्रवासीको बैंक खाता २ thousand० हजार must हुनुपर्दछ। पेश गरिएको आवेदनको विचारमा करीव weeks हप्ता लाग्छ।
सर्त। मोनाकोमा व्यवसाय खोल्नको लागि, तपाईंलाई अधिकारीहरूबाट विशेष अनुमति र रियासतको इलाकामा अफिस वा वाणिज्य घर जग्गाको खरीदको आवश्यक पर्दछ। नयाँ खोलिएको कम्पनीको न्यूनतम पूंजीकरण १ thousand हजार 15 बाट हो। सुरुमा, स्थिति एक बर्षको लागि प्रदान गरिएको छ, त्यसपछि लगातार २ र2बर्षको लागि। यस अवधिको अन्त्यमा, आप्रवासीले मोनेगास्कु मनपराइएको निवासी भिसा प्राप्त गर्दछ, जुन १० बर्षको लागि मान्य हो। यो कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना कुनै पनि धेरै पटकसम्म बढाउन सकिन्छ।
नर्वेली बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका भनेको यहाँ तपाईंको आफ्नै व्यवसाय खोल्नु हो।
लागत। पंजीकरण लागत १ thousand हजार amount को राशि हुनेछ - यो कति हो कम्पनी को अधिकृत पूंजी खोल्न हुनु पर्छ।
सर्तहरू। आवेदकसँग उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अनुभव हुन अनिवार्य छ र नर्वेका अधिकारीहरूले विचारका लागि विस्तृत व्यवसाय परियोजना बुझाउनु पर्छ। केवल एक नर्वेको नागरिकलाई निर्देशक वा कम्पनी प्रबन्धकको पदमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।
सान मारिनोको सानो राज्यमा, इटालीको इलाकाको चारै तिर घेरेर, धनी मानिसहरूका लागि निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका। यो गर्नका लागि तपाईले कम्तिमा 500०० हजार € को उपस्थिति प्रमाणित गर्न आवश्यक छ, वा यही रकमको लागि यहाँ घर जग्गा खरीद गर्नुहोस्। निवास अनुमति प्राप्त गरे पछि, सान मारिनोको नागरिकताको लागि आवेदन दिनको लागि, तपाईंले थप 30० बर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ।
सर्बियाई निवास अनुमति प्रदान गर्न, यहाँ पहिले नै अपरेटिंग कम्पनी किन्न पर्याप्त छ, वा तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर।
लागत। न्यूनतम अधिकृत पूंजी कम्तिमा 500०० यूरो हुनुपर्दछ, र दर्ता प्रक्रियाको लागत १२०० € हुन्छ। संयुक्त स्टक कम्पनीहरु को लागी अधिकृत पूंजी को राशि अधिक छ:
JSC - १० हजार।
CJSC - २ thousand हजार।
व्यापारीको खातासँग 3,5. thousand हजार € भन्दा बढी हुनुपर्दछ।
सर्तहरू। थप आवश्यकताहरूमध्ये: सर्बियामा व्यावासायिक परियोजना र व्यक्तिगत वा भाडाको आवासको उपस्थिति।
अन्य विकल्पहरू। उसको घुलमिलता र आवासको उपलब्धताको प्रमाण पछि, विदेशीले तीन वर्षको अवधिको लागि निवास अनुमति प्राप्त गर्दछ। घर जग्गा खरीद को मात्रा कानून द्वारा स्थापित छैन, यद्यपि त्यस्ता परियोजनाहरु पहिले नै सर्बियाई अधिकारीहरु द्वारा विचार गरीरहेको छ।
टर्कीको निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका छोटो अवधिको स्थिति हो - १ बर्ष भन्दा बढि। निम्न कारणका लागि उनिहरुलाई जारी गर्छन्:
एक टर्की नागरिक संग विवाह।
लागत। स्थिति प्राप्त गर्न, एक विदेशीसँग कम्तिमा .5,5..2 हजार must हुनुपर्दछ personal आफ्नो व्यक्तिगत खातामा। घर जग्गा खरिद मूल्य कुनै पनि हिसाबले सीमित छैन। रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियाको लागि, तपाईले लगभग २ हजार pay तिर्नु पर्छ।
हाल, मोन्टेनेग्रोमा एक कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ जुन तपाईंलाई देशको सबै आवासको लागि एक स्थानीय निवास अनुमति प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यो गर्नका लागि, तपाईले आवेदकको खातामा 3,65. thousand thousand,००० युरोको उपस्थितिको प्रमाण दिन आवश्यक छ। अर्को विकल्प यो देश मा तपाईंको आफ्नै व्यवसाय उद्यम खोल्न को लागी हो।
लागत। स्थानीय अध्यागमन कानूनहरू व्यवसाय लगानीकर्ताहरूको लागि धेरै वफादार छन्। तपाईको आफ्नै कम्पनी खोल्नको लागि, यहाँ १ of पूंजी पर्याप्त छ, र बैंक खातामा - €०० €।
सर्तहरू। आवेदकको मेडिकल बीमा, खातामा पैसा र अपराधिक रेकर्ड हुनै पर्छ।
स्विजरल्याण्डमा बसोबास गर्न सजिलो तरीका विशेष गरी धनी विदेशीहरू हो। वीआईपी माइग्रेसनका प्रतिनिधिहरूका लागि निवास अनुमति स्थिति दर्ता छ महिना भन्दा बढि लिन सक्दछ। यस अवस्थामा लगानीको मात्रा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। तर स्विजरल्याण्डमा बस्ने जीवनका फाइदाहरू भने धेरै हुन्छन् - उच्च स्तरको जीवन र सुरक्षादेखि लिएर शेन्जेन क्षेत्रमा स्वतन्त्र आन्दोलन।
लागत। कुलमा लगानी गर्ने दुई तरिकाहरू छन्:
निष्क्रिय, स्विस राज्य कोषमा भुक्तानी गरिएको एकमुश्त करको रूपमा। यसको आकार वार्षिक १०,००० युरो हो।
एक परिचालन व्यवसायमा लगानी - १ लाख € बाट।
दर्ता प्रक्रिया CHF ,50०,००० खर्च हुनेछ।
सर्तहरू। स्विजरल्याण्डमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न चाहने प्रत्येक व्यापारीले गम्भीर चयन प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै आवेदकहरू छन्, र अधिकारीहरू तिनीहरू बीचबाट सबै भन्दा योग्य योग्य चयन गर्छन्। तसर्थ, एकमुश्त कर तिर्नु स्विस निवास अनुमति प्राप्त गर्नको लागि अझ वास्तविक तरिका हो।
युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्दै
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यूरोपमा प्रत्येक राज्यले आफ्नै विकल्प विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ। त्यसकारण, त्यहाँ जान चाहने प्रत्येक रूसीले व्यक्तिपरक मापदण्डको संख्याबाट अघि बढ्नै पर्छ। धनी नागरिकहरूका लागि सबैभन्दा लाभदायक विकल्प भनेको घर जग्गामा लगानी गर्नु हो। यदि तपाईं स्वतन्त्र रूपले यूरोपियन युनियनमा जान चाहानुहुन्छ भने शेन्जेन देशहरूमा निवास अनुमति छनौट गर्नुहोस्।
↑ यूरोपियन राज्यहरूमा निवास अनुमति ↑ युरोप मा एक निवास अनुमति को लाभ ↑ कहाँ सजिलो छ र कसरी निवास अनुमति प्राप्त गर्न ↑ निवास अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो तरीका कहाँ छ ↑ कसरी निवास अनुमति प्राप्त गर्ने ↑ युरोपमा निवास अनुमति पाउनुहोस् ↑ युरोपमा कसरी निवास अनुमति प्राप्त गर्ने ↑ युरोपमा निवास अनुमति पाउन कहाँ सजिलो छ ↑ युरोपमा निवास अनुमति प्राप्त गर्दै ↑ गैर- यूरोपीय राज्यहरूमा निवास अनुमति ↑ युरोपेली देशहरुमा बसोबास अनुमति ईयू मा समावेश छैन ↑ निवास अनुमति ईयू होइन ↑ युरोपियन युनियन मुलुकहरूमा होइन ↑ युरोप निवास अनुमति ↑ EU निवास अनुमति ↑